भरतपुर अस्पतालमा रोबोट जस्तो बच्चा, हेर्नेको भिड (भिडियो सहित) – Gulmiews
भरतपुर अस्पतालमा रोबोट जस्तो बच्चा, हेर्नेको भिड (भिडियो सहित)
June 4, 2015 Sanju Kauchha
No comments	राजेश घिमिरे
भरतपुर, जेठ २१ । चितवनको भरतपुर अस्पतालमा अनौठो स्वरुप भएको बच्चा जन्मिएपछि हेर्नेको भिड लागेको छ । हिजो दिउसो अस्पताल भर्ना भएकी रत्ननगर नगरपालिकाको मालपुरकी वविता मुशहरले जन्माएको बच्चा झट्ट हेर्दा विल्कुलै फरक स्वरुपको छ ।राती ९ः५० बजे जन्मिएको बच्चाको दाँत देखिन्छ । सो बच्चाको आँखा छैन भने शरिर कडा र हात खुट्टा बाँङ्गीएको छ । नौलो प्रकृतीको बच्चा जन्मिएपछि यहाँ विशेषज्ञ चिकत्किसहरु अनुशन्धानमा लागेका छन् । यस्तो किसिमको असामान्य बच्चाहरु बेला बेलामा जन्मिने गरेको भएपनि ठ्याक्कै यस्तै बच्चा भने नदेखिएको भरतपुर अस्पतालका स्त्री तथा प्रसुती विभाग प्रमुख डा. सुनिलमणी पोखरेलले बताउनुभयो । प्रारम्भिक अनुशन्धानका क्रममा चिकित्सकहरुले सो वालकलाई अपाङ्ता भएको भनेका छन् ।
सामान्यतया वावु आमाको जीनमा परिवर्तन आउँदा असामान्य बच्चाको जन्म हुने गरेको डा. पोखरेलले बताउनुभयो । त्यसैगरी गर्भवती महिलाले प्रयोग गर्ने औषधिका कारण पनि यस्तो समस्या देखिन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । बच्चाको शारिरिक वनावट देखिएपछि शरिर भित्रका अंगहरुको बिषयमा जानकारी नभएका कारण तत्कालै केहि भन्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘तर यस्तो प्रकृतीको बच्चा बाँच्ने गरेका छैनन्’, डा. पोखरेलले भन्नुभयो । अस्पतालको प्रसुती विभागमा लामो समय देखि काम गर्दै आएकी स्वास्थ्यकर्मी पन्चु लामाले अहिले सम्म यस्तो बच्चा नदेखेको बताउनुभयो ।
झट्ट हेर्दा रोबोट जस्तो देखिने बच्चा जन्मिएपछि भरतपुर अस्पतालको स्त्री तथा प्रसुती वार्डमा हेर्नेको भिड लाग्ने गरेको छ । कतिपयले त पैशा तिरेर बच्चालाई हेर्ने गरेका छन् ।
भरतपुर अस्पतालका स्त्री तथा प्रसुती विभागका प्रमुख डा. सुनिल मणी पोखरेलसँगको कुराकानी पनि सुन्न सक्नुहुन्छ ।
सिनर्जी एफ.एम डट कम
Related Posts	३५ सन्तानका वाबुद्धारा सय वटा सन्तान पुराउन चौथो श्रीमतीको खोजी...	June 22, 2016	गुल्मीकी गीताले जन्माईन् एकैपटकमा चार सन्तान...	January 15, 2016	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ताजा अप्डेट	यार्सागुम्बा – कहाँ पाइन्छ ? कसरि बन्छ ? के महत्व छ ? तेजेन्द्र थापाको डकुमेन्ट्री (भिडिओ)
Polls Archive बिदेशका खबर	गुल्मी सम्पर्क समिति दक्षिण कोरियाद्धारा पुर्नमिलन तथा सहयोग...	२ वटै किड्नी फेल भएकी गुल्मेली चेलीलाई बेलायतबाट ३ लाख २७ हज...	गल्कोट समाज जापानको प्रथम पूर्ण बैठक सम्पन्न, भूकम्प प्रभावि...	गुल्मेली पत्रकार थापालाई अमेरिकामा बिशेष सम्मान...	ईण्टरनेटबाट	ओझेलका खबर	ओझेलका खबर – घर भत्केर छाप्राको बास, बाबु बितेर आर्कैक...	रेडियो कार्यक्रम “ओझेलका खबर” समग्रमा लुकेको-लुकाईएको, दबेको-दबाईएको आवाज हो । यो कार्यक्रमले समाजमा रहेका भ्रष्ट्राचार, अनियमितता र अन्य अनैतीक कृयाकलापहरुको डटेर समाना गर्दछ ।...	गुल्मीको मौसम	Partly Cloudy	15 °C	24 Oct 2016
प्रायोजित बिज्ञापन	@gulminewsयार्सागुम्बा – कहाँ पाइन्छ ? कसरि बन्छ ? के महतो छ ? तेजेन्द्र थापाको डकुमेन्ट्री (भिडिओ) https://t.co/05ZdGWJCcI #Gulminews #Gulmi1 day agoRetweetमहेश बस्नेत गुल्मी आउँदै https://t.co/BT8pgJCcek #Gulminews #Gulmi1 day agoRetweetतलको पानी माथी उक्लीएपछि… https://t.co/uxPrSvEk3K #Gulminews #Gulmi1 day agoRetweetदलित वस्तीमा जाँड रक्सी झै–झगडा न्युन https://t.co/VA0mRVQGxl #Gulminews #Gulmi2 days agoRetweetपहिलो पटक गुल्मीमा कपि उद्योग सञ्चालन https://t.co/vmnnk4bdu1 #Gulminews #Gulmi3 days agoRetweet अपराध खबर	यौन धन्दा गरिरहेका ११ जोडी प्रहरी द्धारा पक्राउ...	गुल्मीका एक युवाको बाटोमा कुटपिट, भिरमा शव फेला, हत्या अभियो...	शवको पहिचान : नेटाकी ८६ बर्षिय जसा श्रीस...	Gulminews Team	गुल्मीन्युज डट कम